China chair Mould fekitari uye vagadziri | HEYA
Sachigaro Mould ndeyaSachigaro Mould pasi peSachigaro Mould. Zvinoenderana nemhando dzakasiyana dzechigadzirwa, Sachigaro Mould inogona kukamurwa kuita yechinyakare dhizaini uye yakasarudzika manyorerwo, senge rattan epurasitiki cheya chakuvhuvhu, yekunze cheya jekiseni mafomu, inokwenenzverwa epurasitiki cheya mafuru, yekupeta cheya jekiseni jekiseni mugadziri mugadziri, nezvimwewo.
Taizhou Heya Mould Co., Ltd chishandiso uye inofa fekitori yeChechi Mould zvinoenderana zvakasiyana mutengi zvinodiwa.
Isu tinogamuchira OEM & inopihwa zvichibva pamasampuli, kana chikamu kudhirowa, kana iwo sampuli mafoto.
The chitaurwa zvichaita kugutsa imi mose muforoma yepamusoro uye chakuvhuvhu mutengo.
Tiri kutarisira kubatana kwakasimba nemi.
Chigadzirwa Chigadzirwa Sachigaro Mould
Pashure: Sachigaro Moulds
Zvadaro: Chigaro cheGungwa Mould